Bavuke umbhejazane abebedilizelwa imijondolo | Isolezwe
Bavuke umbhejazane abebedilizelwa imijondolo
Isolezwe / 8 February 2013, 10:29am / NQOBIZIZWE ZWANE
BAMFUNA la eduze kwabo uMasipala weTheku abahlali baseMadlala Village ISITHOMBE BONGANI MBATHA
BAPHUME ngesamagundane abasebenzi bakaMasipala weTheku esigangeni esibizwa ngeMadlala Village, eLamontville, izolo ngesikhathi abantu abangene ngo dli kule ndawo bevuka umbhejazane besho ukubadla luhlaza ngesikhathi bezodiliza eminye imijondolo eyakhiwe ngoseyili ngokungemthetho.
“Vimba ngalapho, bayabaleka manje uma siza kubo. Iqiniso wukuthi sifuna ukubakhahlela nathi manje, baqala nini ukucekela phansi izimpahla zethu. Sikhathele manje, sibalindile, uma befika kuyofa ofayo ngoba nathi siyalwa manje,” kusho umholi wakule ndawo uMnuz Richard Madlala.
“Selokhu saziveza ukuthi singamalungu e-NFP sithwele kanzima kule ndawo sihlezi sidilizelwa. Into esihlushelwa yona kakhulu wukuthi sijoyine i-NFP sisuka ku-ANC, yileso isono sethu,” kusho uMadlala.
Uthe nakuba bayaphila kungenxa yokusizwa yi-NFP ngezinto zokwakha ezifana namapulangwe nemali yokuthenga okuya ngasethunjini.
IPhini likaSihlalo we-NFP eThekwini, uMnuz Thami Khoza lithe: “Akukho impela emthethweni ukuhlala kwabo kuleya ndawo kodwa ayikho indawo kamasipala eyake yathathwa kahle, kuyaliwa. Ngesikhathi kuphuma izindlu zomxhaso eLamontville laba bantu abazitholanga kunalokho zatholwa abantu okungebona nabakuleli lokishi ngendlela engaqondakali. Uma bekhishwa laba bantu kuthiwa abashonephi ngoba abanazo izindawo zokuhlala. Uma bephuma lapha kufanele bathole izindlu ngale kwalokho abahlale phansi sizobona ukuthi sibalekelela kanjani,” kusho uKhoza.
Eqhubeka uKhoza uthe akangabazi ukuthi lokhu okuqhubekayo kunepolitiki phakathi. UNkk Nolubabalo Mthembu oyikhansela le-ANC kule ndawo ushaye phansi ngonyawo ethi lokhu okwenziwa yi-NFP kuyipolitiki eshibhile.
“Abantu abafuna izindlu kufanele balandele imigudu efanele njengabanye bangenzi okubheke eceleni. Uma sivuma ukuthi kube nemijondolo kuleli hlathi kuchaza ukuthi asizimisele ngokuqeda imijondolo okushayisanayo nomgomo wombutho wokufuna ukuyiqeda nya imijondolo eThekwini,” kusho uNkk Mthembu.
Okhulumela umasipala, uMnuz Thabo Mofokeng uthe bazoqinisa ezoku-phepha kubasebenzi emuva kokuhujwa kwabo.